Download any Amerika Avaratra F-86 EF SABRE + SP1 FS2004 - Rikoooo
Downloads 15 423
Fa ny FSX mifanaraka dika kitiho etoIo add-eo am-boalohany dia natao ho an'ny FS2004.
Eto dia ny any Amerika Avaratra F-86 E / F SABRE + SP1 fanavaozam-baovao. Fiaramanidina amin'ny cockpit 3D feno sy sary-azo textures, feo dia mampino sy ny modely tsara dia tena avo. Zavatra tsy ampiana-on mora ho payware, saingy freeware noho ny fahasambarantsika! Izy io dia mahatalanjona! A fahita firy izany andro izany ... Isaorana i SectionF8 noho ny hatsaram-panahy ny fiaraha-miasa. Tafiditra tao rakitra io fonosana manokana ny 9 fanampiny textures.
FAMPITANDREMANA: Tsy maintsy mamaky ireo boky ahitana ny fahatakarana ny fampandehanana ity fitaovana ao anatin'izany ny zava-misy fipetrahana fitaovana.
Jereo mifandraika Vintage lahatsary: